Iza i Anton Lazzaro? Voasambotra noho ny fanondranana olona an-tsokosoko ny stratejika repoblikana iray sy Gisela Castro Medina, 19 taona - Pop-Kolontsaina
Iza i Anton Lazzaro? Voasambotra noho ny fanondranana olona an-tsokosoko ny stratejika repoblikana iray sy Gisela Castro Medina, 19 taona
Ny stratejika repoblikana sady mpitantana ny fampielezan-kevitry ny kongresy teo aloha Anton Lazzaro dia vao tsy ela akory izay nosamborina tamin'ny alàlan'ny fampiharana ny lalàna federaly tamin'ny 12 aogositra ary voarohirohy ho fanondranana olona an-tsokosoko an-jatony taona izao.
Lazzaro dia miatrika fanenjehana dimy amin'ny fanondranana zaza tsy ampy taona ary fanakanana ny fitsarana telo. Nosamborin'ny FBI i Lazzaro ny alakamisy maraina. Tamin'io andro io ihany dia tsy navoaka tany amin'ny fitsarana federaly ny fiampangana azy nandritra ny nisehoany tao St. Paul, Minnesota.
Ny mpitsara amerikanina Becky R. Thorson dia nandidy an'i Lazzaro higadra mandra-pahatongan'ny fotoam-pitsarana azy amin'ny herinandro ambony. Nambaran'ny mpampanoa lalàna fa olona enina no nangataka fiarovana fanampiny tamin'i Lazzaro. Nanambara i Thorson fa fanirian'izy ireo mafy ny hirosoan'ny Etazonia amin'ny torolàlana momba ny fitazonana azy ireo.
FANAMORANA: Ny stratejikan'ny Repoblikana malaza sady mpitantana ny fampielezan-kevitra Anton Lazzaro dia voasambotra tamin'ny resaka fanondranana olona tsy ampy taona tsy ampy taona. Mitombo hatrany ny lisitr'ireo mpivaro-tena amin'ny Repoblika. pic.twitter.com/I4w4RPwtQ3
- Tsy mandainga miaraka amin'i Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) 12 aogositra 2021
Lazzaro dia voarohirohy ho nanangona tra-boina dimy tsy ampy taona noho ny firaisana ara-nofo karama teo anelanelan'ny Mey sy Desambra 2020. Niezaka ny hitaona ny fahenina izy. Nilaza ny fiampangana fa niditra an-tsehatra tamin'ny famotopotorana mihitsy aza izy satria nikatona azy io.
Ny olona faharoa izayhadihadiana amin'ity raharaha ity dia Gisela Castro Medina, 19 taona. Voasambotra noho ny fiampangana an'i Lazzaro ihany koa izy. Izy koa dia nantsoina hoe 'mandositra ny fahamarinana.' Sary iray no voalaza fa nalefa tany Instagram tamin'ny Mey izay mampiseho an'i Anton Lazzaro sy Gisela Castro Medina miaraka amin'ny hetsika iray.
Iza i Anton Lazzaro?
Anton Lazzaro sy Donald Trump. (Sary avy amin'ny Twitter / OccupyDemocrats)
arc manaraka dragon ball manaraka
Lazzaro dia malaza amin'ny fampisehoana ny fomba fiainany manankarena amin'ny media sosialy. Mampiseho azy anaty sambo manokana ny sary, mitondra fiara tsy mahomby amin'ny fiara fanatanjahan-tena, ary mirehareha amin'ny filokana any Las Vegas nefa mitazona vola be.
Mpanome GOP efa ela izy, saingy nitombo ny fanomezany nanomboka ny taona 2016. Ny angon-drakitra momba ny fitantanam-bolan'ny fampielezan-kevitra dia mampiseho fa nanao fanomezana be dia be tamin'ny Repoblikana Minnesota izy tamin'ny taona 2020. Vola an'aliny dolara izany vola izany.
Ny tranokalan'i Lazzaro dia nilaza fa izy no mpanorina ny vondrona PAC Repoblikana Big Tent izay mikendry ny 'hamaritana ny Antoko Repoblikana indrindra ho an'ny vitsy an'isa. LGBT , ary ireo vehivavy izay diso fampahalalana nataon'ny antoko Demokratika. '
Ny pejy fandraisan'anjaran'ilay 30 taona dia misy sary izay ahitana an'i Lazzaro hita miaraka amin'i Donald Trump sy ny filoha lefitra teo aloha Mike Pence. Izy no mpanorina ny Gold River Group, orinasam-barotra sy haitao voasoratra anarana ao Wyoming. Miresaka mihitsy aza fa nihazakazaka niasa nomerika i Lazzaro ho an'ny fampielezan-kevitra politika repoblikana maro any California sy Minnesota.
I Lazzaro dia niasa ho mpitantana ny fampielezan-kevitry ny kandidà GOP Congressional Lacy Johnson ary nihazakazaka nihazakazaka nanala ny Repoblika Demokraty Ilhan Omar. Nianatra tao amin'ny Brigham Young University any Idaho izy ary mponina ao Minneapolis, Minnesota.
Vakio ihany koa: Aiza no hijerena ny Taranaka: The Royal Wedding online? Disney Plus, daty famoahana, antsipirian'ny streaming ary maro hafa
inona no mampiavaka ny olona aminao?
ahoana no tsy minono amin'ny fiainana
azonao atao ve ny karazana empath mihoatra ny iray
heveriko fa tsy tia ahy intsony ny vadiko